यसरी खनिए पृथ्वीजयन्तीबारे सामाजिक सञ्जालमा [हेर्नुहोस् स्टाटसहरु]
नेपाली इतिहासका एक महान् व्यक्तित्व पृथ्वीनारायण शाह ( इ सं १७२३ - १७७५ ) को २९६ औं जन्मजयन्तीको उपलक्ष्यमा वहाँप्रति हार्दिक सम्मान र सबैमा हार्दिक शुभकामना!
नेपाल राज्यको भौगोलिक एकीकरणमा पृथ्वीनारायण शाहले निर्वाह गरेको नेतृत्वदायी भूमिकालाई ऐतिहासिक भौतिकवादी दृष्टिकोणबाट सबै नेपालीले सकारात्मक रूपमा ग्रहण गर्नुपर्दछ। साथै उनकै भाषामा 'चार वर्ण छत्तीस जातको फूलवारी' नेपाललाई एक्काइसौं शताब्दीको नयाँ परिवेशमा सही संघीयताको प्रवन्धन मार्फत् इन्द्रधनुषी राष्ट्रीय-राज्यको रूपमा भावनात्मक रूपले समेत एकतावद्ध गर्न विशेष ध्यान दिनुपर्दछ।
खिम घले पत्रकार
हरेक बर्ष यो दिन मेरो एउटा असहमति दर्ज गर्ने गर्छु:
राजाहरु राजा नै थिए । राजा नै छन् र राजा नै रहनेछन् । राजाहरुबाट लोकतन्त्र र विधिको शासनको कहिल्यै अपेक्षा गरिन्न । त्यसैले कुनै जमानाका एक सामान्ती राजाले आफ्नो आकांक्ष परिपूर्तीका लागि साम, दाम, दण्ड, भेद सबै प्रयोग गर्दा याे मुलुकको प्रारुप बनेको हो । उनले हामी सबैको भलो गर्ने मनुसुवाले गरेको काम नै होइन । त्यसैले उनको जय जयकार गर्नु पर्ने म कुनै आवश्यकता पनि देख्दिन नत अहिलेको आधुनिक मापदण्डमा राखेर उनलाई दुद्कार्नु नै आवश्यक छ । रह्यो कुरो मेरो राष्ट्रियताको : यो मेरो बसको वा छानेर आएको कुरा होइन । आफु जन्मेको भूमिप्रतिको निष्ठा एउटा कुरा हो । यहाँ नजन्मेर अर्कै ठाउँमा जन्मेको भए मेरो निष्ठा त्यही भूमिप्रति रहन्थ्यो ।
दिपेन्द्र लामा पत्रकार
इतिहास अनुसार नेपालको पहिलो राजा गोपाल वंशका भुक्तमान हुन् । उनले आजभन्दा ३ हजार वर्षअगाडि नेपालमा ८८ वर्ष शासन गरेका थिए । तर, अभिलेख र मुद्रा निष्कासनका आधारमा विसं ५२० मा गद्दी आरोहण गरेका लिच्छवि वंशका मानदेवलाई नेपालका प्रथम ऐतिहासिक राजा मानिँदै आएको छ ।
विसं १४८५ मा राजा भएका यक्ष मल्लले नेपालको सीमानालाई पूर्वमा बंगाल, पश्चिममा गोरखा, उत्तरमा शिकारजोङ र दक्षिणमा गयासम्म फैलाएको इतिहास पाइन्छ । त्यो भनेको अहिलेको नेपालभन्दा धेरै ठूलो भूभाग हो ।
धेरैलाई लाग्ला, हाम्रो नेपालको अहिले जुन नक्सा छ, त्यो पृथ्वीनारायण शाहको पालामा कोरिएको हो । तर होइन । पृथ्वीनारायणको निधन भएको ८६ वर्षपछि अर्थात् विसं १९१७ मा जंगबहादुर राणाको पालामा नेपालको वर्तमान नक्साले अन्तिम रुप लिएको हो । उनले नेपाली फौज पठाई बेलायती शासकलाई लखनऊ कब्जा गर्न सघाएका थिए । त्यहीबेला नेपालले उपहारस्वरुप बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुर पाएको थियो ।
हो, पृथ्वीनारायणले पनि थोरबहुत मलजल अवश्य गरेका हुन् । तर नेपाल भन्ने देश उनको मात्र पेवा होइन ।
चन्द्रशेखर अधिकारी पत्रकार
उनी थिए र पो त नेपाल बन्यो।नेपाली भयौं,गर्व गर्छौ।‘राष्ट्र निर्माता’लाई ‘छोटे’हरूले केही समय भुले/कतै गुन लगाए/सायद रिस फेरे।आम जनताले भुल्न सकेनन/भुल्दैनन पनि।र, पुन:स्मरण गर्न ‘छोटे’हरू बाध्य भए।
आशा कोइराला बिना विभागीय मन्त्री
नेपालको इतिहासमा पृथ्वीनारायण शाहको छुट्टै पहिचान र महत्त्व छ ।
महेश चौचारसिया पत्रकार
गणतन्त्र नेपालका प्रजा-रैतिहरुको आत्माबाट पृथ्वीनारायण शाहको भूत अझै गएनछ । मालिकको जयजयकार गर्ने पुरानो बानी जो छ । भिखारीलाई सुनकै थाल दिए नि आखिर उसले माग्ने भीख नै हो ।
बाबुराम आचार्य , युवा नेता
पृथ्वी जयन्ती तिरस्कार गर्नु भनेको म नेपाली होइन भन्नु सरह हो।
मातृका पौडेल पत्रकार
फटाहा,नकच्चरा र निर्देशित अभियन्ताको कुनै दबाई हुँदैनःयिनीहरुको रोग भनेको देशभक्तिप्रति चरम घृणा फैलाउनु र केही माल गोज्याउनुमात्र होः
२५० वर्षअघिका पृथ्वीनारायण शाहले गरेको देश एकीकरणमा एक्काइसौं शताव्दीको चेतना खोज्नु चाहिँ यिनीहरुको दिमागमा पसेको नरक पन्पनिएको मात्र हो
मनहरि तिमल्सिना, सूचनाकर्ता
पृथ्वीनारायण शाहकाे राज्य बिस्तार अभियानले अन्तत: भाैगाेलिक एकीकरण गर्‍यो। तर, विभिन्न जाति, भाषा, समुदाय र संस्कृतिबीच भावनात्मक र अात्मिक एकीकरणकाे कार्यभार पूरा गर्न सकेन। त्यसले बाह्य राष्ट्रियता बलियाे पार्न गुणात्मक भूमिका खेल्याे। तर, अान्तरिक राष्ट्रियताकाे कार्यभारमाथि ध्यान जान सकेन। त्यही कार्यभार यतिबेला कम्युनिष्टहरुकाे काँधमा अाएकाे छ।
रजमान तामाङ राजनीतिकर्मी
पृथ्वीनारायण शाहको बारेमा चलाउन खोजिएको बहसका धेरै आयमहरु छन।उनले गरेको काम गोर्खाराज्यको बिस्तार हो।नेपालको एकीकरण होइन।नेपाल खाल्डोको बिजय अभियान पछि नेपाल भन्ने देश बनेको हो।अहिले पनि बुढापाक्काहरु काठमाडौ जान नेपाल जाने भन्छ्न।भुरेटाकुरे राज्यलाइ बलपूर्वक कब्जा गरेर यिनले अहिलेको नेपाल बनाएको साच्चो हो।
स्वागत नेपाल, कानुन व्यवसायी
पृथ्वीनारायण शाहले गोत्र किन परिबर्तन गरे ?
कम्तीमा पृथ्वीनारायण शाहले त नेपाल एकीकरणको बाधकहरु आफ्नै नाता र गोत्रभित्रका मान्छेहरु पनि भएकोले गोत्रहत्या पाप हुने हुनाले उनले एकीकरणविरोधीलाई नातागोत्र भित्रकै भए पनि सफाया गर्न काशीमा गएर गोत्र परिबर्तन गरी फर्कीएर नातागोत्र भित्रकाको पनि हत्या गरेका थिए । अहिले त देशका लागि होइन, सत्ताका लागि, नातागोत्रवादका लागि मात्र जनताको हत्या गर्छन्, जनता मर्दा पनि सत्तासुस्वादूहरु घ्यूभात खाएर बस्छन् । सद्दाम हुसैनले पनि देशको सूचना अमेरिकीहरुलाई बेच्ने आफ्नै दुई ज्वाइँहरुलाई आफ्नै हातले गोली हानेर मारेका थिए । त्यस्तो राष्ट्रप्रेमी तानाशाह, विदेशीसँग मिल्ने आफ्नै घरभित्रको भए पनि हत्या समेत गर्न सक्ने शूरो देशप्रेमी जनप्रेमी शासक चाहिएको छ यो देशलाई ।